သင့်ကိုပိုစမတ်ကျလာစေမယ့် ဝါသနာ ၅ ခု
16 Apr 2018 . 10:04 AM
လူတိုင်းမှာဝါသနာပါရာကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ တချို့သောဝါသနာတွေက ငွေကုန်ကြေးကျများတယ်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်တာလို ဂေါက်ရိုက်တာလိုမျိုးပေါ့။ တချို့ဝါသနာတွေကျပြန်တော့ ကိုယ့်ကိုပျက်စီးစေတယ်။ ဒီလို အမျိူးမျိူးအထွေထွေရှိတဲ့အထဲမှာမှ ကိုယ့်ကိုပိုပြီးစမတ်ဖြစ်လာစေမယ့် ကောင်းကျိုးဘက်ကိုဦးတည်တဲ့ဝါသနာ ၅ ခုရှိပါတယ်။ ဒီအထဲကတစ်ခုခုမှာကိုယ်ဝါသနာထုံနေတယ်ဆိုရင်တော့ ကံကောင်းတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကို မဖြစ်မနေလုပ်နေရတာထက်ဝါသနာပါတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီဆိုရင်တော့ ဆက်သွားပါလို့ပြောရမှာပါ။ သင့်ကိုအမြဲကျန်းမာ ဖျတ်လတ်တဲ့ပုံနဲ့တွေ့မြင်နေရမှာမို့ပါပဲ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမှန်မှန်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် ဦးနှောက်ကိုလည်းများစွာ ကောင်းကျိုးပေးပြီး မှတ်ဥာဏ်လည်းကောင်းနေစေမယ်။ BDNF လို့ခေါ်တဲ့ပရိုတင်းထွက်ရှိလာတဲ့အတွက် Long-term memory လိုမျိုး Cognitive Benefits တွေရရှိလာဖို့အထောက်အကူပေးတယ်။ ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကိုရော ဦးနှောက်ကိုပါကောင်းကျိုးတွေများစေတာမို့ သင့်ကိုပိုတော် ပိုသွက်ပြီး ပိုစမတ်ကျလာစေပါတယ်။
တူရိယာတစ်ခုခုကို သင်ယူဖို့ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင် သင့်အတွက်အရမ်းကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲ။ သူကစိတ်ဖိစီးမှု စိတ်ညစ်ညူးမှုတွေကို ပြေပျောက်စေပြီး စိတ်နှလုံးကျေနပ်နှစ်သိမ့်ခြင်းကိုယူဆောင်လာပေးပါတယ်။ ဦးနှောက်နဲ့ပတ်သက်ရင် Cognitive Skills ပိုကောင်းလာသလို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Skill တွေလည်း တက်လာစေပါတယ်။ ကလေးတွေကိုတူရိယာတစ်ခုခုနဲ့တီးခတ်ဆော့ကစားခိုင်းရင်လည်း သူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တက်လာပြီး စကားသွက်သွက်ပြောတတ်လာတယ်ဆိုတာလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။
ဂိမ်းဆော့ရင်မကောင်းဘူးလို့ လူကြီးသူမတွေကထင်ကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းမှာတော့ ဂိမ်းကိုအချိန်အကန့်အသတ်လေးတစ်ခုနဲ့ဆော့ကစားပေးရင် ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရပါတယ်။ သူက Working memory ပိုကောင်းလာစေတယ်တဲ့။ လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်နဲ့ လုပ်ဆောင်ရဦးမယ့်အလုပ်တွေကို မှတ်မိနေစေတယ်။ သိုလှောင်ထားပြီးတဲ့မှတ်ဥာဏ်ကောင်းနေသလို အကြောင်းအရာသစ်တွေကိုလေ့လာနိုင်စွမ်းလည်း တိုးတက်စေပါတယ်။ နည်းဗျူဟာချမှတ်ပြီး အလုပ်လုပ်တတ်လာစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချိန်အတိုင်းအတာသတ်မှတ်ပြီး ဂိမ်းဆော့ပေးပါ။ ၂၄ နာရီ Dota ခုတ်နေတာမျိုးတော့ မလုပ်ရဘူးပေါ့။
ဘာသာစကားအသစ်သင်ယူတာကို ဝါသနာပါရင်တော့ အကျိုးကျေးဇူးကအများကြီးပါ။ သိသာတဲ့ရလဒ်ကတော့ ခရီးသွားရင်သူများထက်ပိုအဆင်ပြေတယ်။ ပြီးတော့ ဦးနှောက်ဆိုတာကြွက်သားတစ်ခုပဲဖြစ်တာမို့ များများလေ့ကျင့်ပေးလေ ပိုပြီးရလဒ်ကောင်းတွေထွက်ပေါ်လေပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဘာသာစကားသင်ယူခြင်းက ဦးနှောက်အိုမင်းလာခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။ စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းကိုပိုကောင်းလာစေသလို စိတ်ခံစားချက်နဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရတဲ့ ကိစ္စတွေမှာလည်း ပိုပြီးကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိစေပါတယ်။ ပုစ္ဆာတွေ အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်လည်းပိုတိုးလာစေပါတယ်တဲ့။ အာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းပြီး အိုင်ဒီယာကောင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာကြောင့် ပိုစမတ်ကျလာရတာဖြစ်ပါတယ်။
စာဖတ်ခြင်းဝါသနာဟာကောင်းတဲ့ဝါသနာတစ်ရပ်ဆိုတာ အားလုံးလက်ခံကြပြီးသားပါ။ ဒါပေမဲ့ ဦးနှောက်ပိုင်းကိုဘယ်လိုအကျိုးများစေတယ်ဆိုတာကိုတော့ တိတိကျကျသိသူနည်းလောက်ပါသေးတယ်။ စာဖတ်ခြင်းကြောင့် ဘာသာစကားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘယ်ဘက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးလာစေသလို Mirrors brain connectivity လို့ခေါ်တဲ့ တကယ့်လက်တွေ့မှာ အသုံးချစီမံတတ်ခြင်းအစွမ်းလည်းရှိလာစေပါတယ်။ ဥပမာ- ကားမောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ဖတ်ထားတယ်ဆိုရင် တကယ်ကားမောင်းတဲ့အခါမှာ ပြန်အသုံးနိုင်တာမျိုးပါ။ ဒါကြောင့် နေ့တိုင်းစာဖတ်ပါ။ စာဆိုတဲ့နေရာမှာစာကြီးပေကြီးတွေကိုချည်းပြောတာမဟုတ်တာမို့ ရုပ်ပြစာအုပ်ဖတ်သူတွေလည်း ဒီအကျိုးတွေကိုရနိုင်ပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဒီဝါသနာ ၅ ခုထဲကတစ်ခုခုရှိနေရင် ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုထက်မကရှိနေရင် သင်ပိုစမတ်ကျလာနိုင်ပြီမို့ ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်ပါနော်။
သငျ့ကိုပိုစမတျကလြာစမေယျ့ ဝါသနာ ၅ ခု
လူတိုငျးမှာဝါသနာပါရာကိုယျစီရှိကွပါတယျ။ တခြို့သောဝါသနာတှကေ ငှကေုနျကွေးကမြားတယျ၊ ဓာတျပုံရိုကျတာလို ဂေါကျရိုကျတာလိုမြိုးပေါ့။ တခြို့ဝါသနာတှကေပြွနျတော့ ကိုယျ့ကိုပကျြစီးစတေယျ။ ဒီလို အမြိူးမြိူးအထှထှေရှေိတဲ့အထဲမှာမှ ကိုယျ့ကိုပိုပွီးစမတျဖွဈလာစမေယျ့ ကောငျးကြိုးဘကျကိုဦးတညျတဲ့ဝါသနာ ၅ ခုရှိပါတယျ။ ဒီအထဲကတဈခုခုမှာကိုယျဝါသနာထုံနတေယျဆိုရငျတော့ ကံကောငျးတယျလို့ဆိုရမှာပါ။
ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုကို မဖွဈမနလေုပျနရေတာထကျဝါသနာပါတဲ့အဆငျ့ကိုရောကျနပွေီဆိုရငျတော့ ဆကျသှားပါလို့ပွောရမှာပါ။ သငျ့ကိုအမွဲကနျြးမာ ဖတျြလတျတဲ့ပုံနဲ့တှမွေ့ငျနရေမှာမို့ပါပဲ။ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုမှနျမှနျပွုလုပျမယျဆိုရငျ ဦးနှောကျကိုလညျးမြားစှာ ကောငျးကြိုးပေးပွီး မှတျဉာဏျလညျးကောငျးနစေမေယျ။ BDNF လို့ချေါတဲ့ပရိုတငျးထှကျရှိလာတဲ့အတှကျ Long-term memory လိုမြိုး Cognitive Benefits တှရေရှိလာဖို့အထောကျအကူပေးတယျ။ ဒီလိုခန်ဓာကိုယျကိုရော ဦးနှောကျကိုပါကောငျးကြိုးတှမြေားစတောမို့ သငျ့ကိုပိုတျော ပိုသှကျပွီး ပိုစမတျကလြာစပေါတယျ။
တူရိယာတဈခုခုကို သငျယူဖို့ဝါသနာပါတယျဆိုရငျ သငျ့အတှကျအရမျးကောငျးတဲ့အခကျြပါပဲ။ သူကစိတျဖိစီးမှု စိတျညဈညူးမှုတှကေို ပွပြေောကျစပွေီး စိတျနှလုံးကနြေပျနှဈသိမျ့ခွငျးကိုယူဆောငျလာပေးပါတယျ။ ဦးနှောကျနဲ့ပတျသကျရငျ Cognitive Skills ပိုကောငျးလာသလို ခှဲခွမျးစိတျဖွာခွငျး စီမံခနျ့ခှဲမှုနဲ့ပတျသကျတဲ့ Skill တှလေညျး တကျလာစပေါတယျ။ ကလေးတှကေိုတူရိယာတဈခုခုနဲ့တီးခတျဆော့ကစားခိုငျးရငျလညျး သူတို့ရဲ့ဆကျသှယျပွောဆိုနိုငျတဲ့စှမျးရညျတကျလာပွီး စကားသှကျသှကျပွောတတျလာတယျဆိုတာလလေ့ာတှရှေိ့ရပါတယျ။
ဂိမျးဆော့ရငျမကောငျးဘူးလို့ လူကွီးသူမတှကေထငျကွပါတယျ။ တကယျတမျးမှာတော့ ဂိမျးကိုအခြိနျအကနျ့အသတျလေးတဈခုနဲ့ဆော့ကစားပေးရငျ ကောငျးကြိုးတှအေမြားကွီးရပါတယျ။ သူက Working memory ပိုကောငျးလာစတေယျတဲ့။ လုပျခဲ့တဲ့အလုပျနဲ့ လုပျဆောငျရဦးမယျ့အလုပျတှကေို မှတျမိနစေတေယျ။ သိုလှောငျထားပွီးတဲ့မှတျဉာဏျကောငျးနသေလို အကွောငျးအရာသဈတှကေိုလလေ့ာနိုငျစှမျးလညျး တိုးတကျစပေါတယျ။ နညျးဗြူဟာခမြှတျပွီး အလုပျလုပျတတျလာစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အခြိနျအတိုငျးအတာသတျမှတျပွီး ဂိမျးဆော့ပေးပါ။ ၂၄ နာရီ Dota ခုတျနတောမြိုးတော့ မလုပျရဘူးပေါ့။
ဘာသာစကားအသဈသငျယူတာကို ဝါသနာပါရငျတော့ အကြိုးကြေးဇူးကအမြားကွီးပါ။ သိသာတဲ့ရလဒျကတော့ ခရီးသှားရငျသူမြားထကျပိုအဆငျပွတေယျ။ ပွီးတော့ ဦးနှောကျဆိုတာကွှကျသားတဈခုပဲဖွဈတာမို့ မြားမြားလကေ့ငျြ့ပေးလေ ပိုပွီးရလဒျကောငျးတှထှေကျပျေါလပေါပဲ။ ဒါကွောငျ့ ဘာသာစကားသငျယူခွငျးက ဦးနှောကျအိုမငျးလာခွငျးကိုကာကှယျပေးပါတယျ။ စီမံခနျ့ခှဲမှုပိုငျးကိုပိုကောငျးလာစသေလို စိတျခံစားခကျြနဲ့စဉျးစားဆုံးဖွတျရတဲ့ ကိစ်စတှမှောလညျး ပိုပွီးကောငျးမှနျအောငျလုပျဆောငျနိုငျစှမျးရှိစပေါတယျ။ ပုစ်ဆာတှေ အခကျအခဲတှကေိုဖွရှေငျးနိုငျတဲ့စှမျးရညျလညျးပိုတိုးလာစပေါတယျတဲ့။ အာရုံစူးစိုကျမှုကောငျးပွီး အိုငျဒီယာကောငျးတှထှေကျပျေါလာတာကွောငျ့ ပိုစမတျကလြာရတာဖွဈပါတယျ။
စာဖတျခွငျးဝါသနာဟာကောငျးတဲ့ဝါသနာတဈရပျဆိုတာ အားလုံးလကျခံကွပွီးသားပါ။ ဒါပမေဲ့ ဦးနှောကျပိုငျးကိုဘယျလိုအကြိုးမြားစတေယျဆိုတာကိုတော့ တိတိကကြသြိသူနညျးလောကျပါသေးတယျ။ စာဖတျခွငျးကွောငျ့ ဘာသာစကားနဲ့ဆိုငျတဲ့ဘယျဘကျဦးနှောကျဖှံ့ဖွိုးလာစသေလို Mirrors brain connectivity လို့ချေါတဲ့ တကယျ့လကျတှမှေ့ာ အသုံးခစြီမံတတျခွငျးအစှမျးလညျးရှိလာစပေါတယျ။ ဥပမာ- ကားမောငျးခွငျးနဲ့ပတျသကျတဲ့စာအုပျဖတျထားတယျဆိုရငျ တကယျကားမောငျးတဲ့အခါမှာ ပွနျအသုံးနိုငျတာမြိုးပါ။ ဒါကွောငျ့ နတေို့ငျးစာဖတျပါ။ စာဆိုတဲ့နရောမှာစာကွီးပကွေီးတှကေိုခညျြးပွောတာမဟုတျတာမို့ ရုပျပွစာအုပျဖတျသူတှလေညျး ဒီအကြိုးတှကေိုရနိုငျပါတယျလို့ ပွောခငျြပါတယျ။
ဒီဝါသနာ ၅ ခုထဲကတဈခုခုရှိနရေငျ ဒါမှမဟုတျတဈခုထကျမကရှိနရေငျ သငျပိုစမတျကလြာနိုငျပွီမို့ ဆကျလကျဆုပျကိုငျထားလိုကျပါနျော။
by redrose .4hours ago
by Htet Htet .9hours ago